काम साक्षात्कार प्रश्न | USAHello देखि क्यारियर स्रोतहरू | USAHello
काम साक्षात्कार प्रश्न
जागिर साक्षात्कार लागि तयार गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका प्रश्नहरूको जवाफ अभ्यास छ. यो तपाईं थप विश्वस्त महसुस बनाउन र तपाईं आफ्नो साक्षात्कार मा राम्रो तरिकाले गर्न मदत गर्नेछ. त्यहाँ काम साक्षात्कार प्रश्न धेरै हाकिमहरूले सोध्न छन्. प्रश्नहरूको पढ्न र राम्रो जवाफ कसरी दिन पत्ता.
जब तपाईं एक काम को लागि लागू, तपाईं सोधे हुनेछ धेरै काम साक्षात्कार प्रश्न. तपाईं आफ्नो कौशल र अनुभव बारे आग्रह गरिने. हरेक साक्षात्कार फरक छ, तर धेरै हाकिमहरूले सोध्न केही प्रश्नहरू छन्. अभ्यास भन्दा साधारण काम साक्षात्कार प्रश्नहरूको जवाफ. अभ्यास तपाईं राम्रो गर्न मद्दत गर्नेछ!
यहाँ छन्5प्रश्न धेरै हाकिमहरूले तपाईं माग्छ:
आफैलाई बारेमा मलाई भन्नुहोस्
यो हरेक साक्षात्कार तपाईं सोधे हुनेछ पहिलो प्रश्न हो. छोटकरीमा तपाईं थियो गरेको जब वर्णन र आफ्नो सबै भन्दा राम्रो कौशल के हो कुरा. तपाईं स्कूल गए भने, तपाईं अध्ययन के कुरा. धेरै लामो समय को लागि कुरा छैन, र तपाईं महसुस वा अब गरिरहेका छन् भन्ने कुरा संग समाप्त. जस्तै, तपाईंले यो काम को लागि लागू गर्न तपाईं उत्साहित भन्न सकिन्छ.
तपाईं यस संस्थाको बारेमा के थाहा छ (वा व्यवसाय)?
जब तपाईं यो प्रश्न सोधे छन्, तपाईंलाई थाहा सकारात्मक कुरा कुरा. तपाईं कम्पनी बारेमा के मनपर्छ भन्न. को कर्मचारी वेबसाइटमा देख द्वारा यो प्रश्न लागि तयार. यस कम्पनीको लक्ष्य पढ्न र के तिनीहरूले काम गरिरहेका छौं परियोजनाहरु. कम्पनी एक वेबसाइट गर्दैन भने, प्रयोग सिसाको ढोका वा भुकनु. तिनीहरूले अन्य कम्पनी सोच्न के तपाईं बताउन सक्छ.
हामी किन किराया गर्नुपर्छ?
तपाईंको साक्षात्कार अघि, काम विवरण पढ्न. छनौट3गर्न5तपाईं भनेर कौशल भन्दा काम लागि महत्त्वपूर्ण छन्. ती कौशल कुरा. तिनीहरूले संगठन मदत कसरी भन्न. जस्तै, एक शिक्षकको सहायक भन्न सक्छ हुन लागू कसैले, "म भन्दा बढी छ 8 वर्ष daycares मा र सामुदायिक केन्द्र मा बच्चाहरु संग काम. म अनुभव पाठ्यक्रम बनाउन र धेरै संस्कृतिका मानिसहरू काम गरेका छन्. तपाईंको विद्यालय आउन कि परिवार को धेरै स्पेनी बोल्न कि म याद. स्पेनी मेरो पहिलो भाषा हो, त्यसैले म अनुवाद मदत गर्न सक्छ। "
आफ्नो कमजोरी के हो?
तपाईं कमजोरी छैन भन्न छैन. निश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चयन. तपाईं आफ्नो कमजोरी मा काम गर्न गरेका के कुरा. यो छ भने - कसरी राम्रो मिल्यो व्याख्या. एक साधारण कमजोरी एउटा उदाहरण सार्वजनिक बोल्ने छ. के तपाईं सार्वजनिक बोल्ने मा कक्षाहरू लिएका छन् र आफ्नो पछिल्लो काम मा धेरै अभ्यास गरेका भन्न सक्छ. सार्वजनिक बोल्न जब तपाईं अब धेरै विश्वस्त महसुस भन्दै द्वारा अन्त, वा तपाईंले अझै पनि यो काम गरिरहेका छौं कि.
जहाँ तपाईं आफूलाई देख्न5वर्ष?
तपाईं सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा काम प्राप्त र राम्रो छ भनेर भन्न. आफ्नो स्थिति माथिको काम हो के तपाईंलाई थाहा छ भने, यसलाई उल्लेख. तपाईं छैन भने, के तपाईं पनि अधिक कम्पनी मदत गर्न सक्छ जहाँ एक उच्च स्तर काम हुन चाहनुहुन्छ भनेर भन्न. तपाईंले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ के कौशल उल्लेख.
सबै काम साक्षात्कार प्रश्नहरूको जवाफ गर्दा, जवाफ दिन प्रयास2मिनेट वा कम. साक्षात्कारकर्ता थप जानकारी सुन्न चाहन्छ भने, तिनीहरूले पालन-अप प्रश्न हुनेछ.
व्यवहार काम साक्षात्कार प्रश्न
कहिलेकाहीं, एक कर्मचारी तपाईंले तिनीहरूलाई तपाईं एक कठिन अवस्थामा गऱ्यौ कसरी एक कहानी बताउन अनुरोध सक्छ. तिनीहरूले तपाईंलाई व्यक्ति कस्तो हो सिक्न चाहनुहुन्छ र तपाईं सामना कसरी.
व्यवहार प्रश्नहरूको जवाफ गर्दा, समस्या कार्य परिणाम प्रयोग (द्वारा) ढाँचा.
1. समस्या: विस्तृत अवस्था र समस्या वर्णन गरेर आफ्नो जवाफ सुरु. काम अवस्था र मान्छे वर्णन. जस्तै, म Cocina Michoacana मा एक प्रबन्धक थियो जब तपाईं "भन्न सक्छ, म पाँच Waiters र waitresses व्यवस्थित. को Waiters एक अक्सर समय काम गर्न देखाउनका छैन। "
2. कार्य: के तपाईं समस्या समाधान गर्न गरे वर्णन. तपाईं भन्न सक्छ, "म निजी समय काम गर्न आ बारेमा वेटर कुरा. उहाँले आफ्नो आमा धेरै बिरामी थियो कि मलाई भन्नुभयो. उहाँले बिहान सबेरै सुरु सक्ने एक caregiver पाउन सक्षम थिएन. कहिलेकाहीं, उहाँले त्यो राम्रो महसुस भएको थिएन भने घर रहन थियो। "
3. परिणाम: सफल परिणाम बारेमा कुरा र तपाईंले के सिक्नुभयो. राम्रो अन्त्य हुनेछ, "म दिनमा पछि वेटर गरेको फेरबदल परिवर्तन गर्ने निर्णय. तिनीहरूले मदत गर्न सक्छ त्यसैले केही सहकर्मी बताउन ठीक थियो भने म आग्रह. उहाँले हो भन्नुभयो. उनीहरू त्यहाँ आपतकालीन थियो भने आफ्नो पारी कवर गर्न सहमत भए। "
जहाँ समस्या हल भएको थिएन कथा बताउन छैन.
यहाँ केही अन्य साधारण व्यवहार प्रश्न हो:
तपाईं आफ्नो मालिक संग disagreed समयको बारेमा हामीलाई भन्नुहोस्.
तपाईं सहकर्मी संग प्राप्त भएन समय वर्णन.
तपाईंको proudest उपलब्धि के हो?
के तपाईं काममा गल्ती समयको बारेमा हामीलाई भन्नुहोस्.
के तपाईं काममा दबाब धेरै अन्तर्गत थिए जब एक समय वर्णन.
तपाईंको साक्षात्कारकर्ता तपाईं व्यक्तिगत प्रश्न गर्न अनुमति छैन. यो तपाईंको वैवाहिक स्थिति समावेश, कति बच्चाहरु तपाईं, र आफ्नो उमेर. कसैले तपाईंलाई व्यक्तिगत प्रश्न सोध्छन् यदि तपाईं जवाफ दिन चाहँदैनन्, तपाईं भद्रताका साथ भन्न भन्न सक्छौं, "म प्रश्नको जवाफ छैन रुचाउँछु।"
काम साक्षात्कार प्रश्न सबैका स्नायु बनाउन. सबै भन्दा राम्रो कुरा सम्झना र तपाईंको उत्तर अभ्यास छ! तिमी सक्छौ भने, साथी वा परिवारका सदस्य संग अभ्यास.
रिजुम सुझावहरु पढ्नुहोस्
सूची व्यावसायिक बनाउन सन्दर्भ